Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Odaa Bus: Tarsiimoo Oromoo itti humneessan moo tooftaa haraaya saba itti saaman?
Odaa Bus: Tarsiimoo Oromoo itti humneessan moo tooftaa haraaya saba itti saaman?
Daadheessaan OPDOn kubbaaniyyaa geejjiba ummataa ODAA jedhamu dhaabuuf bobeessaa jirtu dhimma falmii tahee jira. Gariin akka waan kubbaaniyyaan kun qabeenya Oromoo kan kubbaaniyyaalee Tigree kan akka Selam Bus waliin dorgomuuf yaadameetti dhaadhessaa jiran. Gara kaanin ammoo Selam Bus santu Oromiyaa keessa socho'uun waan rakkiseef maqaa Oromoo baafte dhufe jedhu.
Mee kanuma OPDOn jettu dhugaadha jennee haafudhanuu. ODAA Bus Oromoo humneessuuf kan dhaabbate jennee haa fudhannu. Kubbaaniyyaan geejjibaa akkanaa gara galiitiin milkii ( profitable) akka argatu shakkiin hin jiru. Gaafiin ka'uu malu, kubbaaniyyaaleen amma dura maqaa Oromootiin dhaabbatan maalif kufan? ODAAn hoo haaluma saniin maallaqa hiyyeessi itti dhangalaasu fudhatee cilee bishaan buute akka hin taane wabiin maali? Fakkeenyaaf DINSHO fi kubbaaniyyaaleen isa jala turan akkamitti kufan. Rakkoo bulchiinsaa ( management) moo kan tarsiimooti? Rakkoo bulchiinsaa akka hin jedhamne kubbaaniyyaaleen sun namottaa OPDO keessatti sammuu qaban jedhaman kan akka Dubbaalaa Jaalleefi Abdishuu Huseenin bulfamaa ture. Tarsiimoo gabayaatis yoo taate Oromoon garagalee invest itti gochaa irraayis bitaa ture. Maarree maaf kasaaran? Yoo yaadattan bara hoggansa Dubbaalaa Jaallee kubbaaniyyaa geejjibaa ummataafi fe'uumsaa dhaabatee ture? Kubbaaniyyaan sun yoosuu kufee meeshaan isaa Trans Ethiopia fi Selam Bus fa'aan dhaalame. Bifuma saniin daldalli jimaatis cufamee Azeeb fudhatte. Kana jechuun ifatti DINSHO akka kasaaru kan taasise tarkaanfii siyaasaa TPLF fudhateedha. Maarree ODAA Bus carraan warra isa duraa akka hin mudanne wabii maltu jira?
Warri ODAA Bus dhaadheessuun ummanni akka aksiyoonii bitatu barbaadan kubbaaniyyaaleen amma duraa maalif akka kufan qoratanii beeksisuu qaban. ODAA Bus tarsiimoo akkamiitiin geggeeffamuu heda? Boordiin eenyu? Gareen bulchiinsaa ( management) hoo muuxannoofi barnoota akkamii qabu? Dabalataanis kuni dhimma daldalaa waan taheef ogeeyyotaan malee dabballoota paartiitiin dhaadheffamuunis ta'ee buluun miidhaa malee faaydaa akka hin qabne beekuun barbaachisaadha. Hammasiifuu ummanni keenya hawwiidhaan maallaqa isaa akka hin qisaasne gorsina.
Posted by Hasan Ismail at 10:05 AM